प्राकृतिक चिकित्सामा-माटो चिकित्सा पद्धति – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
२४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०८:४७
✍️ प्रा. देवीभक्त ढकाल
संसारमा सबै निर्जीव तथा सजीव वस्तुहरू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश जस्ता पञ्चतत्वबाटै अस्तित्वमा हुन्छन् । मानव शरीर पनि पञ्चतत्वबाटै बनेको छ । यिनै पाँच तत्वहरूको असन्तुलनबाट मानव शरीरमा रोगहरूको प्रवेश हुन्छ भन्ने प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानको मान्यता छ । प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानले यिनै पाँच तत्वलाई सन्तुलन गरेर मानव शरीरका अतिरिक्त मानव मस्तिष्कलाई समेत स्वस्थ्य, तम्दुरुस्त राख्छ । शरीरमा उत्पन्न विभिन्न रोगलाई माटोको सहयोगमा उपचार गर्ने पद्धतिलाई माटो चिकित्सा भनिन्छ ।
माटोले प्राणीलाई पालनपोषण, वृद्धि र विकासमात्रै गर्दैन यसले जीवधारीको आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न वनस्पति र खाद्यन्नको आपूर्ति पनि गर्छ । माटो जीवधारीको संरक्षण कर्ता हो । जीवधारीको आश्रय, साहारा र जीवन धान्ने स्रोतको रूपमा माटोको महत्वपूर्ण भूमिका भएका कारण नै हुनसक्छ पृथ्वीलाई हामीले सगौरव माता भन्छौं । माताको काम जन्मदिने, हुर्काउने, बढाउने भएकाले जीवधारीको सबैभन्दा नजिकको प्यारो सम्बन्ध नै आमा हो । पृथ्वी जीवधारीका लागि आमाकै पर्यायवाची शब्द हो ।
प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानले माटोलाई महत्वपूर्ण उपचार विधि मान्दछ । माटोको उपचारले टाउको दुख्ने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पेटको रोग, हृदय रोग, अनिद्रा, तनाब, शरीरमा भएको विजातीय पदार्थलाई अवशोषित पनि गर्छ । छालासम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारका अतिरिक्त अन्य धेरै रोगको निवारणका लागि प्राकृतिक चिकित्सामा माटो चिकित्सा अत्यन्तै प्रभावकारी मानिन्छ । प्राकृतिक चिकित्सामा रोगीको आहार, विहार, जीवनशैली, व्यवहारको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष पर्ने भएकाले प्राकृतिक चिकित्सामा आहार शिक्षा, जीवनशैली शिक्षा, व्यवहार शिक्षा प्राकृतिक चिकित्साका अभिन्न अंग हुन् ।
हाम्रो आहार, विहार, जीवनशैली, व्यवहारको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष पर्ने भएकाले प्राकृतिक चिकित्साको प्रभावकारिताका लागि प्राकृतिक चिकित्सक आहार, विहार साथै जीवनशैलीप्रति सधैं सचेत हुन्छन् । रोगीहरूलाई प्राकृतिक भोजन र प्राकृतिक जीवनशैलीलाई आत्मसात गर्न सधैं अभिप्रेरित गर्दछन् । प्राकृतिक चिकित्सामा भोजन शिक्षा र जीवनशैली शिक्षा उपचार प्रक्रियासँग नै अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । उपचारका अतिरिक्त आहार शिक्षा, जीवनशैली र व्यवहार शिक्षाले प्राकृतिक चिकित्सालाई दिगो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाएको छ । आहार-विहार शिक्षा, जीवनशैली शिक्षा, व्यवहार शिक्षा प्राकृतिक चिकित्साका आधारभूत विशेषता हुन् ।
प्राकृतिक चिकित्साको विशेषता भनेको के हो भने आधुनिक चिकित्सामा जस्तो शरीरमा देखिने रोगका प्रभावको होइन रोगका कारणको उपचारबाट शरीरलाई रोगमुक्त गर्ने काम प्राकृतिक चिकित्साले गर्छ । तसर्थ यो विधा भरपर्दो मानिन्छ । प्राकृतिक चिकित्साले प्राकृतिक वस्तुलाई भोजनको रूपमा ग्रहण गर्न उत्प्रेरित गर्छ । यसले ‘भोजनलाई नै औषधि र औषधि नै भोजन हो’ भन्ने सिद्धान्तको अनुसरण गर्छ । आधुनिक चिकित्सामा जस्तो रोग निवारणका लागि यो विधामा छुट्टै औषधि हुँदैन । प्राकृतिक चिकित्साअन्तर्गत हुने सबै उपचारमा औषधि प्रयोग नहुने भएकाले शरीरमा औषधिको पाश्र्व प्रभावको जोखिम हुँदैन ।
‘औषधि भनेको भोजन हो र भोजन भनेको नै औषधि हो’ भन्ने सिद्धान्तले यो चिकित्सा विधा कम खर्चिलो र गरिबमैत्री मानिन्छ । खासगरी अल्पविकसित देशहरूमा जहाँ आयातबाट सबै आवश्यकता पूरा गरिन्छन् त्यस्ता देशहरूमा महँगा औषधिको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान ती देशहरूका लागि त वरदान नै भन्नुपर्छ । आधुनिक चिकित्सामा औषधिमा हुने अन्धाधुन्ध खर्च यस विधामा नहुने हुँदा नेपाल जस्ता देशहरूले यो विधालाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउनुभनेको लोककल्याणकारी काम गर्नु हो । राज्यको अन्तिम गन्तव्य भनेकै लोककल्याण हो ।
हाम्रो शरीरमा रोग उत्पत्ति हुने मुख्य कारण भनेको शरीरमा उत्पन्न हुने विजातीय पदार्थ वा रूग्णताकारक पदार्थको उपस्थिति हो । माटोको उपचारले शरीरमा भएको विजातीय पदार्थ वा रोग उत्पन्न गर्ने विषाक्त वस्तुलाई आफूमा सजिलैसँग आत्मसात गर्छ । माटोमा शरीरमा भएको विषाक्त वस्तुलाई अवशोषण गर्ने गुणलाई प्राकृतिक चिकित्सा विधाले भरपूर प्रयोग गर्छ । यसले मानव शरीरलाई रोगमुक्त गर्न अनौठो प्रभाव पार्छ । शरीरभित्रको दुषित पदार्थ रौंका छिद्रमार्फत माटोले विषाक्त वस्तुलाई अवशोषण गर्दा रोग शरीरबाट निष्काशन गर्न माटो चिकित्साको प्रभावकारिता प्राकृतिक चिकित्साको भरपर्दो विधि हो ।
खासगरी पाचन प्रणालीलाई सक्षम बनाउन, शरीरमा उत्पन्न असहज अवस्थालाई सहज बनाउन माटो चिकित्साको ठूलो महत्व छ । माटो चिकित्सा विभिन्न प्रकारका चर्मरोगका साथै जटिल स्नायु रोगहरूको निदानमा अचुक मानिन्छ । साथै पक्षाघात जस्ता थुप्रै असाध्य रोगमा पनि माटो चिकित्साले चामत्कारिक फाइदा दिन्छ ।
माटोद्वारा हुने उपचार झट्ट सुन्दा, पढ्दा वा देख्दा यस विधा बारे ज्ञान नहुनेका लागि अविश्वसनीय लाग्न सक्छ तर मानव शरीरको उपचारमा यो उपचार विधि अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ । प्राकृतिक उपचारमा यो विधि अनादिकालदेखि नै प्रयोगमा आएको हो । पश्चिमी दुनियाँका आधुनिक चिकित्सकहरू आधुनिक उपचारबाट आफ्नै उपचारमा असफल भएपछि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट रोगमुक्त भएको घटनाले अहिले प्राकृतिक उपचारको विस्तार साथै लोकप्रियता पश्चिमा देशहरूमा वृद्धि भएको छ । माटोको लेप, पट्टी र स्नान आदिले न केबल शरीरको बाहिरी भागलाई मात्रै सुन्दर बनाउने, रोगमुक्त गर्ने गर्दैन यसले मानव मनभित्रको गन्दगीलाई पनि हटाएर मनलाई शान्त, सुन्दर र स्वस्थ्य बनाउने काम गर्छ ।
यस्तो उपचारमा प्रयोग हुने माटो सामान्य माटो होइन । यसरी उपचार गर्ने माटो जमिनभन्दा चार-पाँच फिटभित्रको प्रदूषित नभएको स्वच्छ हुन अनिवार्य छ । यसरी जमिनमा सुरक्षित रहेको माटोलाई निकालेर त्यसमा मिसिएका पात, पतिंगर, झारपातलाई छुट्याउनुपर्छ । माटोमा मिसिएका बालुवा, ढुंगा आदिलाई छुट्ट्याएपछि त्यसलाई छानेर निस्कने धुलोलाई घाममा सुकाउनुपर्छ । त्यसरी तयार गरिएको नरम माटोमात्र उपचारमा प्रयोग हुन्छ । माटोलाई उपचारका लागि प्रयोगयोग्य बनाउने विभिन्न चरण पार गरेपछिमात्रै उक्त माटोलाई उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
शरीरलाई गर्मी प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा तातो माटो र शीतलता प्रदान गर्नुपर्ने उपचारमा चिसो माटाको प्रयोग हुन्छ । प्राकृतिक चिकित्साको उपचारको सुरुवातको बिन्दु मानव शरीरको पेट हो । मानव शरीरभित्र पेटमा विजातीय पदार्थको सञ्चयका कारण नै रोग उत्पत्ति हुन्छ भन्ने मान्यता प्राकृतिक चिकित्साको भएकाले प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानले उपचारको प्रारम्भ नै पेटमा चिसो माटो, तातो माटो साथै चिसोपानी र तातोपानीको सहयोगमा गर्छ । यसरी शरीरमा सञ्चित रूग्णकारक वा विषाक्त वस्तु वा विजातीय पदार्थलाई निष्काशन गर्न सर्वप्रथम पेटमा माटाको पट्टीको प्रयोग हुन्छ ।
पेटबाट हानिकारक वस्तुको निष्काशनका लागि भने एनिमाको प्रयोग गरिन्छ । पेटलाई स्वस्थ्य बनाउन प्राकृतिक चिकित्सामा एनिमा अर्थात् वस्तिकर्मको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । माटोबाट उपचार हुने विषय प्राकृतिक उपचारबारे थाहा नहुने जोकोहीलाई सुरुवातमा भने अनौठो अनुभूति हुनसक्छ । तर, यसको प्रभावकारिताले भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई माटो र प्राकृतिक उपचारका विधिप्रति अनौठो विश्वसनीयता सिर्जना गर्छ ।
शरीरमा प्रयोग हुने माटोको पट्टी बनाउन माटोलाई कुटेर धुलो बनाउने, छान्ने र पानी मिसाएर गहुँको आँटा जस्तै मुछ्नुपर्छ । यसरी पट्टी तयार गर्ने चिसो वा तातो पट्टी बनाउने माटो तयार गर्दा त्यसलाई चलाउने वस्तु धातुको प्रयोग नगरिकन काठको प्रयोग गरिन्छ । पेटमा सेकाइ गर्ने माटोको पट्टीको मोटाइ आधा इन्चको हुनुपर्छ भने यसको लम्बाइ भने ९ देखि १० इन्चसम्मको हुन्छ । यसरी बनाइएको माटोको पट्टी शरीरको छालासँग सोझै सम्पर्क हुनेगरी पेटमा २० देखि ३० मिनेटसम्म राखिन्छ ।
यस्तो पट्टी बनाउने माटोलाई पट्टी बनाउनुभन्दा पहिल्यै १२ देखि १४ घण्टासम्म भिजाइन्छ । यसरी पेटमा दिने माटोको पट्टी बिहान खाली पेटमा वा खाना खाएको ५ वा ६ घण्टापछि प्रयोग गर्नुपर्छ । पट्टी प्रयोग गरेको डेढ दुई घण्टाभित्र खाना दिइँदैन । माटो उपचारअन्तर्गत माटो प्याक, माटो लेपन वा माटो स्नान जस्ता रोगको प्रकृति अनुसारका विविध तरिका अवलम्बन गरिन्छ ।
जीवधारीको लागि माटो जीवनदाता, पालनकर्ता दुवै हो । माटो चिकित्साले छालामा रहेका पसिनाका ग्रन्थीलगायत अन्य ग्रन्थीलाई सक्रिय र थप क्रियाशील बनाउँछ । माटोलाई उपचारको साधन बनाउँदा यसले शरीरबाट विषाक्त पदार्थलाई निष्काशन गरेर शरीरलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ । यसका अतिरिक्त माटो चिकित्साले शरीरमा रक्तसञ्चारलाई बढाउँछ भने अनुहारको दाग, चायाँ, डण्डिफोर जस्ता तमाम छालाजन्य रोगलाई निर्मूल गर्न, अनुहारलाई सुन्दर र आकर्ष बनाउन माटो चिकित्सा अत्यन्तै प्रभावकारी विधि हो । यसबाहेक माटो उपचार विधिले रगत जमेर हुने दुखाइमा अनौठो लाभ दिन्छ ।
शरीरमा शीतला दिन्छ । श्वाशप्रश्वाश प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ । रगतमा अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ । रक्तसञ्चारलाई सशक्त बनाउँछ । शरीरमा विकसित विकारलाई नष्ट गरेर शरीरलाई शुद्धीकरण गर्छ । मुटुको धड्कनलाई सामान्य बनाउँछ । रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्छ । तनाव तथा हिनताबोधलाई कम गर्छ । गहिरो निद्रासमेत प्रदान गर्न मद्धत गर्छ । हाडजोर्नीको समस्या र अर्थाइटिसको समस्याको निदान गर्छ । पेट र आन्द्राको तापक्रमलाई सामान्य राखेर कब्जियत र टाउको दुखाइ जस्ता तमाम रोगहरूमा माटो चिकित्साको प्रभाव चामत्कारिक प्रमाणित भएको छ । समग्रमा भन्दा प्राकृतिक चिकित्साअन्तर्गत माटो चिकित्साले रोगीलाई निरोगी र निरोगीलाई दीर्घजीवी बनाउँछ ।
माटोको चिकित्साबाट लाभ लिन प्राकृतिक चिकित्सालयको सेवा लिनुपर्छ । अहिले नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा प्राकृतिक चिकित्सालय छैनन् । निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा यस्ता अस्पताल खुले पनि माटोको उपचारमा अहिलेसम्म नेपालकै ख्यातिप्राप्त र पुरानो अस्पताल हो सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय रजहर ।
त्यसैले रोगीहरू कम खर्चमा सजिलै रोगमुक्त हुन र निरोगी दीर्घजीवी हुन प्राकृतिक जीवनशैली, व्यवहार साथै आहार शिक्षा लिने उत्तम थलोको रूपमा समुदायको संरक्षण र सञ्चालनमा रहेको रजहरस्थित प्राकृतिक चिकित्सालयको सेवा प्राप्त गरेर आफू, आफ्नो परिवार, नातागोता, छरछिमेक समेतलाई कुनै प्रकारको साइड इफेक्टको सम्भावना नभएको स्वास्थ सेवा लिन प्रेरित गरेर प्राकृतिक चिकित्सा विधालाई सम्बद्र्धन र प्रोत्साहित गरौं । आफू स्वस्थ बनौं र सबैलाई स्वस्थ रहन उत्प्रेरणात्मक भूमिका निर्वाह गरौं । जय प्रकृति । जय पूर्वीय उपचार संस्कृति ।
Devi bhakta dhakal
2022-06-07 9:21 am
हिमालय टाइम्सलाई हार्दिक धन्यवाद
2022-06-07 12:04 pm
Whatabeautiful and inspiring piece of information. May suffering be lesser and lesser and people gain their peace and happiness by assimilation with elements of nature. May life not be divorced with natural living.
Sarve bhabantu sukhina…
नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता
सानिमाको प्रायोरिटी काउन्टर नयाँ
आज विश्व उच्च रक्तचाप
उपत्यकामा १२ जनामा हैजा